တိုက်ခန်း - တိုက်ခန်းအရောင်း Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
တိုက်ခန်း classified: တိုက်ခန်းအရောင်း
Ngwe Saung Real Estate
#ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ_တိုက်ခန်းအရောင်းလေးနဲ့_မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ++++++++++++++++++++++++++++ 🌞 ဒဂုံမြို့နယ်၊ ယောမင်းကြီးလမ်းသွယ် 🏡 အကျယ်အဝန်း (35´×40´), 4_Floor. 🌞 1_Master bedroom,1_Bedroom. 🏡 ကြွေပြားခင်း၊ အိပ်ခန်းပါကေးခင်း။ 🌞 နေရာကောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်စျေးအနီး/ ဒဂုံ(၁)ကျောင်းအနီးတွင်တည်ရှိပြီး သွားလာရန်အလွယ်ကူဆုံးနေရာ၊ မိသားစုနေထိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာလေးအား အမြန်ဆုံးရွေးချယ်လိုက်ပါ🙏 🏡 စျေးနှုန်း_၇၅၀သိန်း ☎☎☎☎☎ =========== 09-752 7575 47, 09-250 998 522, 09-340 185 131, 09-7789 69 226.
အရွယ်အစား 1400.00 စတုရန်းပေ
အရွယ်အစား 1100.00 စတုရန်းပေ
အရွယ်အစား 972.00 စတုရန်းပေ
အရွယ်အစား 1026.00 စတုရန်းပေ